Fidangan’ny vidim-piainana Manana vahaolana i Dadavalo
Nitohy tany Toamasina ny fitsidihana nataon’i Marc Ravalomanana sy ny mpiara-dia aminy omaly alakamisy 22 febroary, taorian’ny tany Brickaville, Andovoranto ary Vatomandry.
Sekoly mpanofana mpitsara Averina ny fanadinana noho ny kolikoly
Foana ny fanadinana fifaninana hidirana ho mpianatra ao amin’ny sekoly ambony manofana ho mpitsara sy mpiraki-draharahan’ny fitsarana na ny ENMG natao ny 6 sy ny 7 febroary 2018 lasa teo.
Ady amin’ny kolikoly Resin’i Kaomoro i Madagasikara
Nivoaka omaly ny tatitry ny Transparency International-Initiative Madagascar momba ny tontolon’ny kolikoly sy ny toeran’i Madagasikara momba izany ho an’ny taona 2017, io ilay antsoina hoe IPC (Indice de Perception de la Corruption).
Toeram-pisotroan-toaka eto Antananarivo Mahazo olona 40 isan’andro farafahakeliny
Mahazo vahana tanteraka ny fisotroan-toaka sy ny fidorahana zava-mahadomelina eny anivon’ny fiaraha-monina amin’izao. 11 taona no zandriny indrindra amin’izy ireny izay marihina fa mbola mpianatra.
Fihinana sakafo tsy zarizary Mora mankarary, mampihena ny fitadidiana
Iray amin’ny olona 50 isa sisa amin’izao raha betsaka no afaka manao tahirin-tsakafo any an-tokantranony.
Rakotomihantarizaka Organès Nianjera tao amin’ny “Douche” no nahafaty azy
Nodimandry teo amin'ny faha-71 taonany omaly alarobia 21 febroary tokony ho tamin'ny 4 ora maraina tany Morondava ny minisitry ny filaminana anatiny tamin’ny andron’ny tetezamita Rakotomihantarizaka Rémy Sylvain Organès.
Fisolokiana tany An’aliny ireo lasibatry ny Tany gasy
Nanamarika tetsy amin’ny Falda Antanimena, omaly ny avy eo anivon’ny fikambanan’ireo lasibatry ny fisolokiana nataon’ny orinasa mpivaro-tany,
Resaka ady lova no nambara ho nampidoboka am-ponja azy, saingy tsikaritra ho misy ambadika politika ihany. Tsy arakaraka ny anjara toerany tamin’ny andron’ny tetezamita ny zava-manjo azy ankehitriny satria miady irery sy tsy misy mpiahy ara-bakiteny. Ny olona akaiky tao an-trano ihany aza no voalaza fa tompon’antoka amin’ny fandentehana azy noho izy tsy mety miova hevitra, ka hangina sy tsy hanakiana intsony ny fitondrana HVM, raha toa ka maniry an’izany mafy io olona akaiky azy io. Voalaza fa tokony ho navoaka i Alain Ramaroson tamin’ny fotoana nanaovana ny Frankofonia saingy nijoro hatrany tamin’ny heviny, ka dia izao vao mainka nilentika tanteraka izao. Voalaza ihany koa fa nahazo tsenam-barotra tamin’ireny asa tamin’ny frankofonia ireny mihitsy ilay olona akaiky azy, ka naleony namoy an’i Alain Ramaroson higadra any am-ponja, toy izay ho very fihinanana. Ireo namana aman-tsakaiza niara-nitolona sy niara-dalana taminy ihany koa efa nanadino ary tsy miaraka amin’ny tsy afaka, ara-bakiteny satria reraka sy resy tanteraka ity namana, ka tsy misy tombontsoa azo antenaina intsony any aminy. Re ankehitriny fa aleon’i Alain Ramaroson manamafy orina ny fihavanana amin’ireo mpiara-migadra aminy satria efa tena naloan’ny fiarahamonina aty ivelany ny tenany.